Yintoni iGrafu yeBhara? - Igrafu yeGrafu Inkcazo
Ibrafu Igrafu Inkcazo
Igrafu yebar ibonisa idatha ebonakalayo kwaye ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi-bar chart okanye ibrafu yebha. Idatha iboniswa ngokucwangcisa okanye ijikeleze kwaye ivumela ababukeli ukuba bathelekise izinto eziboniswe. Idatha ebonisiweyo iya kubandakanyeka kwizinto ezinjengeemali, iimpawu, amaxesha kunye nokuphindaphindiweyo njl. Igrafu yebar ibonisa ulwazi ngendlela esinceda ukuba senze i-generalization kunye nezigqibo ngokukhawuleza nangokulula.
Igrafu yesiqhelo ye-bar iya kuba nelebula, i-axis, izikali kunye nemivalo. Iigrafu zebhayi zisetyenziselwa ukubonisa zonke iindidi zolwazi ezifana, amanani amabhinqa kunye nabesilisa esikolweni, ukuthengiswa kwezinto ngexesha lexesha elithile lonyaka. Iigrafu zebhayi zilungele ukuthelekisa ezimbini okanye ngaphezulu.
Imivalo kwibrafu yebhayi ingaba nemibala efanayo, kodwa imibala eyahlukileyo ingasetyenziselwa ukwahlula phakathi kwamaqela ukwenza idatha ibe lula ukuyifunda nokuyiqonda. Iigrafu zebhayi zibhalwe nge-x-axis (i-axis ene-horizontal axis) kunye ne-y-axis (i-axis ngqo). Ukuba idatha yokuhlola igraphed, iinguqu ezizimeleyo zichithwa kwi-axis, xaxa uguquko oluxhomekeke kwi-y-axis.
Xa utolika isatshixo sebharaki, jonga kwibharari ende kunazo zonke kwaye ujonge ibha e mfutshane. Khangela izihloko, jonga ukungahambelani uze ubuze isizathu sokuba zikhona.
Iindidi zeGrafu zeGrafu
Ongatshatanga: Iigrafu zebhayibhile ezingasetyenzisiweyo zisetyenziselwa ukudlulisela ixabiso elichanekileyo lento kwinqanaba ngalinye eliboniswe kwi-axis echaseneyo.
Umzekelo uza kuba ngummeli wenani labesilisa kumabakala 4-6 nganye kwiminyaka ka-1995 ukuya ku-2010. Inani lenani (ixabiso elichanekileyo) lingamelwa ngumbono olinganiselwe ukulinganisa ngezinga elibonakala kwi-axis x. I-axis ye-Y yayiza kubonisa itekiti kunye nelebula kunyaka ohambelana kwibha nganye.
Udidi Iqela elithile okanye igrafu yegrafu isetyenziselwa ukumela amanani adibeneyo kwinto engaphezu kweyodwa ekwabelwana ngayo inqanaba elinye. Umzekelo uya kuba, usebenzisa umzekelo omnye wabha ngasentla kwaye uvelise inani labafundi besetyhini kumabakala 4-6 kwiindidi ezifanayo, iminyaka ka-1995-2010. Imivalo emibili yayiza kubalwa ndawonye, ​​ecaleni, kwaye nganye ibe ngumbala icodelwe ukucacisa ukuba yeyiphi ibar imele ixabiso lamadoda kunye neyayingqinileyo yowesifazane.
Isitampu: Ezinye iigrafu zebra zinegalelo eyahlula ibe yintlukwano emele ixabiso elichanekileyo kwizinto ezimelela inxalenye yeqela lonke. Umzekelo uza kuba ukumela idatha yangaphambili yebakala kwindoda nganye kwibakala 4-6 uze ulandele ixabiso ngalinye elichanekileyo njengengxenye yebharari nganye. Kwakhona kuya kubakho umbala wekhowudi ekufuneka uyenze ukwenza igrafu ifundeke.
Emva kokuba unamava ngegrafu zebar, uza kufuna ukujonga kwezinye iigrafu ezininzi ezenza izibalo kunye nabadlali beenkcukacha. Iigrafu zebhayisi zisetyenziswe esikolweni nje ngeziko lokufundela kwaye ziyabonwa kwikharityhulam ukuya esikolweni esiphakeme. Iigrafu kunye neetshathi ziyimilinganiselo ekuboniseni ngokubonakalayo idatha. Ukuba umfanekiso ufanele amawaka ambalwa ke uya kuqonda ukubaluleka okanye ukutolika ulwazi olwenziwe kwiibhartshi zebar kunye neegrafu.
Ngokuphindaphindiweyo, ndithatha ukusebenzisa ispredishithi ukumela idatha kwiitshathi zebhayibhile. Nantsi i-tutorial ukuze ufunde indlela yokusebenzisa ispredishithi ukwenza ibharati okanye ibrafu.
Eyaziwayo njenge: Iibharaki zeBhara, iGrafu zeGrafu
IQela eliBomi (igrama)
Yintoni Intsimbi Yenwele?
Yintoni enokuyenza Ukuba Unentsapho yoxinzelelo kwiKholeji
I-kayaking i-Stillwater Cove, i-17 Mile Drive, i-Pebble Beach, ne-Carmel Beach